CAN 2019: Madjer wuxuu go'aamiyaa fursadaha Algeria - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »DAAWO SAWIRADA: Madjer oo go'aansaday Algeria
CAXUMX: Madjer wuxuu garsoorayaasha fursad u siinayaa Algeria
Tababaraha Algeria inta u dhaxeysa Oktoobar 2017 iyo June 2018, Rabah Madjer wuxuu dareemay aragtidiisa Fennec si uu ugu iftiimiyo 2019 CAN ee Masar xagaaga soo aadan. Feejignaan ka dib markii uu soo idlaaday sannadihii ugu danbeeyay, farsamoyaqaanku ma dhigayo Greens dhexdiisa ugu caansan.
« Marnaba waligeen kuma guuleysanin wadankeena, laakiin wax walba waa suurtagal in kubada cagta " , ayaa sharraxay "ninkii ku jiray cirbadaha" ee hadalada lagu sameeyay goobta Kooora turjumay DZfoot.com. " Algeria waxay heysataa koox wanaagsan oo leh ciyaartoy aan caadi ahayn sida Mahrez iyo Brahimi. Kuwani waxay bedeli karaan ciyaarta ciyaarta, laakiin hawshu waa mid aad u adag maxaa yeelay marnaba kuma guuleysan horyaalka horyaalka banaanka ah ee Algeria. Waxaan u rajeynayaa nasiib wacan.»
Shaki la'aan, Madjer waxay u beddeshaa dalka martida loo yahay. "Waxaan u maleynayaa in xulashada Masaarida ee bartamaha taageerayaasha, uu leeyahay wax walba oo ay ku qaadato inuu ku guuleysto CAN » , weeraryahankii hore ee FC Porto ayaa yiri ka hor inta uusan soo bandhigin ciyaartoy kale oo guuleysan kara. " Waxaa jira kooxo aad u xoogan. Waxaan aragnay in Morocco ay heysato koox wanaagsan, iyo sidoo kale kooxda Tunisia, kooxda Cameroon oo soo laaban doonta awood ahaan iyo ugu dambeyntii kooxda Senegal. (...) Algeria sidoo kale waxay awood u leedahay inay muujiso waji ka fiican intii ay ku jirtay muddada lagu jiro muddada u-qalmitaanka. " Tallaabada xigta ee loogu talagalay ragga Djamel Belmadi: isku aadka wareega group-ka ayaa la qorsheeyay jimcihii.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.afrik-foot.com/can-2019-madjer-juge-les-chances-de-l-algerie
CAN 2019 Sawirka: Waqtigee iyo immisa kanee?